Samsung Galaxy S8 နှင့် S8 Plus: စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်အရောင်များ | Androidsis
Samsung Galaxy S8 နှင့် S8 Plus: စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်အရောင်များ
ယခုငါတို့အများစုသိသည် လာမယ့် Samsung ကအထင်ကရများ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို, Galaxy S8 နှင့် S8 Plus, ဒါပေမယ့်၎င်းတို့အားလုံးအားယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်များကအတည်ပြုသို့မဟုတ်ပေါက်ကြားခဲ့ကြသည်မဟုတ်။ သို့သျောလညျး, ယနေ့ငါတို့နှင့်ပတ်သက်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည် အသစ်သောဆိပ်ကမ်း၏စျေးနှုန်းများနှင့်တရားဝင်အရောင်များတိုက်ရိုက် Evan Blass (@evleaks) မှ။
Evan Blass သည် Galaxy S8 ၏မော်ဒယ်လ်နှစ်မျိုးစလုံး၊ ၅.၈ လက်မမျက်နှာပြင် (အောက်ခြေအတန်း) နှင့် ၆.၂ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် Plus ဗားရှင်းကိုတွေ့နိုင်သည့်ဓာတ်ပုံကိုသူ၏တွစ်တာအကောင့်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ အတန်း)
မော်ဒယ်နှစ်ခုစလုံး၏ဒီဇိုင်း၏ထင်ရှားသောအချက်မှာ Samsung လိုဂိုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်များမရှိခြင်းတို့ဖြစ်သည် ကွေးအနားနှင့်အနည်းငယ်ကွေးထောင့်. LG G6 နှင့်မတူသည်, အဘယ်သူ၏ရှုထောင့်အချိုး 18: 9, el Samsung Galaxy S8 တွင်ပါဝင်မည် တစ် ဦး 18.5:9မျက်နှာပြင်ပုံစံ.
1 Galaxy S8 နှင့် S8 + အရောင်များ
2 Galaxy S8 နှင့် S8 + တရားဝင်စျေးနှုန်းများ
Galaxy S8 နှင့် S8 + အရောင်များ
Galaxy S8 ၏အရောင်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အသစ်သည်ယခင်ပေါက်ကြားမှုများနှင့်တိုက်ဆိုင်ပါသည်။ ဤအချိန်သည်အချို့သောတရားဝင်အမည်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိထားပြီးဖြစ်သည်။ အနက်ရောင်ကောင်းကင် (အနက်ရောင်), သစ်ခွမီးခိုးရောင် (မီးခိုးရောင်) y အာတိတ်ငွေ (ငွေ)။ ဤအရောင်များအပြင်ခရမ်းရောင်ရွေးစရာလည်းရှိလိမ့်မည်။ သင်အောက်တွင်တွေ့နိုင်သည်။
Samsung ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တကယ်သဘောကျတယ် ရှေ့ဘောင်မိုက် အရောင်မခွဲခြားဘဲစက်ကိရိယာများကိုဤနည်းအရသူတို့သည်၎င်းတို့ထက်သေးငယ်ပုံပေါ်သည် မျက်နှာပြင်သာ။ ကြီးမြတ်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားကြာပါသည်.
Galaxy S8 နှင့် S8 + တရားဝင်စျေးနှုန်းများ
ဓာတ်ပုံကို flagships ၏အရောင်များဖြင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးမကြာမီတွင် Evan Blass ကမည်သည့်အရာများဖြစ်လာမည်ကိုထုတ်ဖော်ခဲ့သည် အမျိုးမျိုးသော Samsung ထုတ်ကုန်များ၏ဥရောပစျေးနှုန်းများ, Galaxy S8, Galaxy S8 Plus, အပါအဝင် DeX ဆိပ်ကမ်း, Gear VR ဗားရှင်းနှင့် Gear 360 ကင်မရာ။
အထူးသ, Galaxy S8 ကိုယူရို ၇၉၉ ကျသင့်မှာပါစဉ် S8 Plus ကို ၈၉၉ ယူရိုဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးစျေးနှုန်းများ 64GB မှတ်ဉာဏ်နှင့်အတူမော်ဒယ်များနှင့်ကိုက်ညီ။
နှိုင်းယှဉ်ချက်အရပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Galaxy S7 နှင့် S7 ၏အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းများကိုယူရို ၇၀၀ နှင့်ယူရို ၈၀၀ အသီးသီးရှိခဲ့သည်။
ယင်းကြောင့် DeX ဆိပ်ကမ်း၎င်းသည် S8 ကိုမော်နီတာတစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည် အသစ်တစ်ခုကို desktop ပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးပါပါမယ် ယူရို ၄၇၉ ကျသင့်မှာပါ။ အသစ် ဂီယာ VR ဝေးလံခေါင်သီသောထိန်းချုပ်မှုနှင့်နည်းပညာနှင့်အတူလှုပ်ရှားမှုကို detect လုပ်ဖို့စျေးနှုန်းနှင့်အတူရောင်းချသွားပါလိမ့်မယ် 129 ယူရိုကင်မရာနေစဉ် ဂီယာ 360 ၂၂၉ ယူရိုကုန်ကျမှာပါ.
ယခုအချိန်တွင် Gear 360 သည်ဒုတိယမျိုးဆက်မော်ဒယ်များကိုရည်ညွှန်းသည်ဆိုသည့်အချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရသေးသော်လည်းလက်ရှိမျိုးဆက်၏စျေးနှုန်းသည်ယူရို ၃၅၀ နီးပါးနီးကပ်ကြောင်းစဉ်းစားလျှင်၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောစျေးနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Galaxy S8 နှင့် S8 + အသစ်များကို ၁၀ ရက်အတွင်းတွင်ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်, ခေါ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုစဉ်အတွင်းလာမည့်မတ်လ 29, ဖြည်ချပြီး။ ငါတို့အကြောင်းသူတို့အကုန်လုံးသိပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့အသက်ရှင်နေတာကိုမြင်ရဖို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သင်တတ်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ တိုက်ရိုက်တင်ဆက်မှုကိုလိုက်နာပါ တရားဝင်ဆမ်ဆောင်းအက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သော "Unpacked 2017" မှတစ်ဆင့်ထုတ်ကုန်သစ်များ၏ထုတ်ကုန်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Samsung Galaxy S8 နှင့် S8 Plus: စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်အရောင်များ